Tamarta Kinetic: waa maxay, maxaa loogu talagalay iyo sidee loo xisaabiyaa | Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 08/10/2021 10:00 | Ciencia
Maadada fiisigiska ee machadka Tamarta jirka. Waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah noocyada ugu muhiimsan dhaqdhaqaaqa walxaha. Si kastaba ha ahaatee, way adag tahay in la fahmo haddii aadan aqoon aasaasi ah u lahayn fiisigiska.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa maqaalkan si aan kuugu sheegno wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato tamarta kinetic iyo astaamaha ugu waaweyn ee ay yihiin.
1 Waa maxay tamar kinetic
2 Xisaabinta tamarta kinetic
3 Ciidamada ku lug leh
4 Caanaha tamarta jirka
5 Tusaale wax ku ool ah
Waa maxay tamar kinetic
Marka laga hadlayo tamarta noocan ah, dadku waxay u haystaan ​​inay tahay tamar la helay si loo dhaliyo koronto ama wax la mid ah. Tamarta Kinetic waa tamarta uu shay leeyahay dhaqdhaqaaqeeda awgeed. Marka aan rabno in aan dardargelino shay, waa in aan codsanaa xoog gaar ah si looga gudbo is -jiidadka dhulka ama hawada. Taas awgeed, waxaan u baahannahay inaan shaqo qabanno. Sidaa darteed, waxaan ku wareejineynaa tamarta shayga waxayna ku socon kartaa xawaare joogto ah.
Waa tamarta la wareejiyay oo loo yaqaanno kinetic energy. Haddii tamarta lagu dabaqay shayga ay korodho, shayga ayaa dardargelin doona. Si kastaba ha noqotee, haddii aan joojino ku -daba -gelinta tamarta, tamarteeda kinetic waxay ku yaraan doontaa is -qabad illaa ay ka joogsato. Tamarta Kinetic waxay ku xiran tahay cufnaanta iyo xawaaraha shayga.
Jidadka cufkoodu yar yahay waxay u baahan yihiin shaqo yar si ay u bilaabaan guuritaanka. Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u socotid, waxaa sii kordhaya tamarta kinetic ee jirkaagu leeyahay. Tamartaas waxaa loo wareejin karaa walxo kala duwan oo dhexdooda ah si loogu beddelo nooc kale oo tamar ah. Tusaale ahaan, haddii qof ordayo oo ay isku dhacaan mid kale oo nasanayey, qayb ka mid ah tamarta kinetic ee ku jirtay orodyahanka ayaa loo gudbin doonaa qofka kale. Tamarta ay tahay in la codsado si dhaqdhaqaaq u jiro waa in ay had iyo jeer ka weynaataa xoogagga isku dhaca dhulka ama dareere kale sida biyaha ama hawada.
Xisaabinta tamarta kinetic
Haddii aan rabno inaan xisaabino qiimaha tamartaan, waa inaan raacnaa sababaynta kor lagu sharaxay. Marka hore, waxaan ku bilaabaynaa inaan helno shaqadii dhammaatay. Waxay qaadataa shaqo si loogu wareejiyo tamarta kinetic shayga. Sidoo kale, iyadoo la tixgelinayo cufka shayga la fogeeyay, shaqada waa in lagu dhuftaa xoog. Awooddu waa inay barbar dhigtaa dusha sare ee ay saaran tahay, haddii kale shaygu ma dhaqaaqi doono.
Ka soo qaad inaad rabtid inaad sanduuq dhaqaajiso, laakiin dhulka ku riix. Sanduuqa ma awoodi doono inuu ka adkaado iska caabbinta dhulka mana dhaqaaqi doono. Si uu u dhaqaaqo, waa in aan ku dabaqnaa shaqada iyo xoogga jihada u dhiganta dusha. Waxaan u yeeri doonnaa shaqada W, xoogga F, culeyska shayga m, iyo masaafada d. Shaqadu waxay lamid tahay waqtiga masaafada. Taasi waa, shaqada la qabtay waxay la mid tahay xoogga lagu saaray shayga masaafada uu ku socdo mahadnaq ahaan xooggaas la adeegsaday. Qeexida xoogga waxaa bixiya cufnaanta iyo dardargelinta shayga. Haddii sheyga uu ku socdo xawaare joogto ah, waxay ka dhigan tahay in xoogga la adeegsanayo iyo xoogga khilaafku ay isku qiimo yihiin. Sidaa darteed, waa xoogag miisaanka lagu hayo.
Ciidamada ku lug leh
Mar haddii xooggii lagu dabaqay shayga uu yaraado, wuxuu bilaabi doonaa inuu hoos u dhaco ilaa uu ka joogsado. Tusaale aad u fudud ayaa ah baabuur. Markaan wadno waddooyinka, laamiga, wasakhda, iwm. Wadadu waxay na siisaa iska caabin. Iska caabbintaan waxaa loogu yeeraa isku -dhac u dhexeeya giraangiraha iyo dusha. Si loo kordhiyo xawaaraha baabuurka, waa inaan gubnaa shidaal si aan u dhalino tamar kinetic ah. Tamartaas, waxaad ka adkaan kartaa isqabqabsiga oo bilaabi kartaa guuritaanka.
Si kastaba ha noqotee, haddii aan ku dhaqaaqno baabuurka oo aan joojinno dardargelinta, waxaan joojin doonnaa xoojinta. Maadaama aysan jirin wax xoog ah oo gaariga saaran, xoogagga isku dhaca ma bilaabi doono inuu jebiyo ilaa uu gaarigu istaago. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in si fiican loo fahmo xoogga nidaamka dhexgalka si loo fahmo jihada uu shaygu qaadan doono.
Caanaha tamarta jirka
Si loo xisaabiyo tamarta jireed waxaa jira isla'eg ka dhasha sababaynta horay loo adeegsaday. Haddii aan ognahay xawaaraha ugu horreeya iyo kan ugu dambeeya ee shayga ka dib masaafad aan safray, waxaan ku beddelan karnaa dardargelinta qaaciddada.
Sidaa darteed, marka caddadka saafiga ah ee shaqada lagu sameeyo shay, xaddiga aan ugu yeerno kinetic energy k ayaa is beddelaya.
Fisikisyahannada, fahamka tamarta kinetic ee shay ayaa lagama maarmaan u ah barashada firfircoonidiisa. Waxaa jira meydad samada ka jira oo meel yaal tamarta kinetic ee uu wado Big Bang welina waa socdaa ilaa maantadan la joogo. Geedi socodka qorraxda oo dhan, waxaa jira waxyaabo badan oo xiiso leh in la barto, waana lagama maarmaan in la fahmo tamartooda kinetic si loo saadaaliyo raad -raacyadooda.
Markaan eegno isla'egta tamarta kinetic, waxaan arki karnaa inay ku xiran tahay afargeeska xawaaraha shayga. Taas macnaheedu waa marka xawaaraha la labanlaabo, dhaq -dhaqaaqiisu wuxuu kordhaa afar jeer. Haddii baabuurku ku socdo 100 km / h, tamartiisu waxay afar jeer ka badan tahay baabuurka ku socda 50 km / h. Sidaa darteed, dhaawaca shilku sababi karo wuxuu afar jeer ka badan yahay shilka.
Tamartaani ma noqon karto qiime taban. Had iyo jeer waa inay noqotaa eber ama togan. Si ka duwan sidii hore, xawaaruhu wuxuu yeelan karaa qiime togan ama taban iyadoo ku xiran tixraaca. Laakiin markaad isticmaaleysid xawaare labajibbaaran, waxaad had iyo jeer heleysaa qiime togan.
Tusaale wax ku ool ah
Ka soo qaad inaan ku jirno fasalka xiddigiska oo aan dooneyno inaan kubbad warqad ku ridno qashinka. Ka dib markaan xisaabinayno masaafada, xoogga iyo dariiqa, waxaan ku qasbanaan doonnaa inaan ku dabaqno qaddar tamar tamar ah oo kubbadda ah si aan uga dhaqaaqno gacanteena oo aan u wareejinno qashinka qashinka. Si kale haddii loo dhigo, waa inaan kicinnaa. Markay kubbadda warqaddu gacanteena ka baxdo, waxay bilaabi doontaa inay dardar geliso, oo is -beddelkeeda tamarta wuxuu ka beddeli doonaa eber (inta aan weli gacanta ku hayno) una beddeli doono X, iyadoo ku xiran hadba sida uu u gaaro.
Garoonka dhexdiisa la tuuray, kubaddu waxay gaari doontaa isugeynteeda ugu sarreysa ee tamarta kinetic isla marka ay gaarto meesha ugu sarreysa. Halkaas, marka aad bilowdo dhaadhacaaga qashinka qashinka, tamarta kinetigaagu waxay bilaabi doontaa inay hoos u dhacdo maadaama ay jiidayso cufnaanta oo loo beddelo tamar suurtagal ah. Markay gaadho salka qashinka ama dhulka hoostiisa oo joogsato, isudheellitirka tamarta kinetic ee kubbada warqaddu waxay ku noqon doontaa eber.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan waxa tamarta kaneecadu tahay iyo sifooyinkeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Tamarta jirka
Cimilada Nobel Prize Cimilada 2021